Gbasara anyị - Guanghan N&D Carbide Co Ltd.
ND carbide na-eme usoro niile dị mma dị ka ọkọlọtọ ISO na API
Ntọala na 2004, Guanghan N&D Carbide Co Ltd bụ otu n'ime ndị na-eto ngwa ngwa ma na-eduga na China na-arụ ọrụ kpọmkwem na simenti tungsten carbide. Anyị ipuiche amị a dịgasị iche iche nke wear akụkụ maka mmanụ & gas mkpọpu ala, eruba akara na ọnwụ ụlọ ọrụ.
Ngwa oru ọgbara ọhụrụ, ndị ọrụ nkwalite dị ukwuu, na arụmọrụ arụmọrụ pụrụ iche na-akpata obere ụgwọ na obere oge ndu na-enye ND aka inye ndị ahịa ya ọrụ pụrụ iche na uru.
Site na nhọpụta nke ngwa ọrụ adịchaghị na oke nkenke na ịchachasị akụkụ dị mgbagwoju anya, ND na-arụ usoro usoro niile na ụlọ ọrụ nke aka ya. ND Carbide na-enyekwa akara ule carbide zuru oke na cobalt na nickel binders. Ndị a na-agụnye akararịrị ọka-ọka maka ngwa chọrọ ihe dị iche iche nke njigide mgbatị na ike mgbagha, ike maka iji rụọ ọrụ na gburugburu ebe obibi, yana akara akara cobalt maka ngwa ọrụ na-achọ nnukwu ike na mmetụta ike.
ND Carbide na - emepụta carbide niile nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ kpuchiri yana akara ule maka izute ndị ahịa pụrụ iche. The sikwuo carbide ihe onwunwe dị ma dị ka ọkara okokụre oghere ma ọ bụ dị ka nkenke-machined akụkụ.
Ọganihu na ihe eji eyi akwa maka akụrụngwa taa chọrọ ngbanwe ọhụụ, ND carbide na-enye gị ngwaahịa iji merie nsogbu ndị ahụ.
Lekwasị anya ma na-adigide
Ọrụ dịịrị mmadụ, ọha mmadụ na gburugburu ebe obibi
Taa, “ọrụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya” abụrụla okwu kacha ewu ewu n’ụwa. Kemgbe ụlọ ọrụ ahụ guzobere na 2004, ọrụ dịịrị ụmụ mmadụ na gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ kachasị mkpa maka ND Alloy, nke bụ nchegbu kachasị nke onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ.
Onye ọ bụla dị mkpa
nye ndị ọrụ
Gbaa mbọ hụ na ọrụ / mmụta mmụta ndụ niile / ezinụlọ na ọrụ / ahụike ruo oge ezumike nka. Na ND, anyị na-elebara ndị mmadụ anya pụrụ iche. Ndị ọrụ were anyị mee ụlọ ọrụ siri ike, anyị na-asọpụrụ, na-ekele ibe anyị ma na-enwe ndidi. Naanị na ndabere a ka anyị nwere ike nweta nlebara anya ndị ahịa anyị pụrụ iche na uto ụlọ ọrụ.
Obi ebere ala ọma jijiji / onyinye nke ihe nchekwa / ọrụ ebere
ND na-ebukari ibu oru diri ndi mmadu. Anyị na-esonye n'ịbelata ịda ogbenye. Maka mmepe nke ọha mmadụ na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, anyị kwesịrị itinyekwu uche na mbelata ịda ogbenye ma were ọrụ nke mbelata ịda ogbenye n'ụzọ ka mma.